कतार संकट अन्त्य गर्न अमिर सक्रिय, फोनपछि साउदी आक्रोशित- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कतार संकट अन्त्य गर्न अमिर सक्रिय, फोनपछि साउदी आक्रोशित
भाद्र २५, २०७४ एजेन्सी
दोहा — साउदी अरबले आफ्नो मुलुकका राजकुमार र कतारका अमिरको टेलिफोन वार्तापछि कतार संकट समाधानका लागि हुने भनिएको वार्ता स्थगित गरेको छ ।
कतार विरुद्धको नाकाबन्दी अन्त्य गर्न अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीले साउदी अरबका राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानलाई टेलिफोन गरेका हुन् । तर वार्ताका क्रममा भएका तथ्यलाई कतारले तोडमोड गरी प्रस्तुत गरेको जनाउँदै वार्ता स्थगित भएको जनाएको हो ।
उनीहरूबीच गत जुन ५ देखि जारी नाकाबन्दीपछि पहिलोपटक कुराकानी भएको हो ।
कतार समाचार संस्था (क्यूएनए) का अनुसार उनीहरूबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको समन्वयमा टेलिफोन वार्ता भएको हो । तर क्यूएनएले दोहाको अग्रसरतामा टेलिफोन वार्ता भएको उल्लेख नगरेकाले साउदी अरब आक्रोशित भएको जनाइएको छ ।
कतारी राजा हमाद अल थानीले तीन महिनादेखि जारी नाकाबन्दीसहितको तनाव वार्तामार्फत अन्त्य गर्न आग्रह गरेका थिए । वार्तामा थानीले नाकाबन्दी गर्न सक्रिय गराएका चार देशसँग वार्ता गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।
उनले अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग पनि टेलिफोन कुराकानी गरेका थिए । थानीले ‘एकता र स्थिरता’ का लागि वार्ता आवश्यक भएको बताएका थिए । उनले दुवै देशलाई मान्य हुने किसिमले वार्ता गर्न आग्रह गरेका थिए ।
जवाफमा साउदी राजकुमारले दुवै देशका सार्वभौमिकतालाई असर नपर्ने गरी वार्तामार्फत समस्याको समाधान गर्नुपर्ने जनाएका थिए । उनीहरूबीच वार्ताका लागि दूत खटाउने सहमति समेत भएको कतारी सञ्चार माध्यमले जनाएको छ ।
साउदी अरबको प्रेस एजेन्सीले सबै पक्षको हितलाई सुनिश्चित गर्न चार देशका मागबारे कतारका अमीर छलफल गर्न तयार रहेको बताएको थियो ।
बहराइन, इजिप्ट र यूएईसँग साउदी अरेबिया सहमतिमा पुगेपछि विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिने सो समाचार संस्थाले जनाएको छ ।
साउदी अरबको नेतृत्वमा इजिप्ट, बहराइन र यूएईले गत जुन ५ देखि कतारमाथि नाकाबन्दी गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरूले कतारसँग जमिन, समुद्र र हवाई सम्पर्कसमेत बन्द गर्दै आएका छन् । चार देशले कतारले चरमपन्थी संगठनलाई सहयोग गरेको, छिमेकी देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको र इरानसँग सम्बन्ध सुदृढ पारेको आरोप लगाएका छन् । तर कतारले भने उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै आइरहेको छ ।
चार देशले नाकाबन्दीको अन्त्य गर्न कतारसामु १३ बुँदे माग राखेका छन् । तीमध्ये इरानसँगको सम्बन्ध तोड्नुपर्ने, कतारस्थित सैनिक बेस हटाउनुपर्ने र अल जजिरा टेलिभिजनको प्रसारण बन्द गर्नुपर्ने मुख्य छन् । तनाव अन्त्यका निम्ति पश्चिमा मुलुकहरूको समर्थनमा कुवेतले गर्दै आएको कूटनीतिक प्रयास सफल हुन सकेको छैन ।
अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय हवाइटहाउसले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कतार संकट समाधानका लागि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कतार र साउदी अरबका नेतासँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेको जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार उनले यूएईका राजकुमार शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयनसँग पनि कुराकानी गरेका थिए ।
वार्ताका क्रममा ट्रम्पले इरानको धम्कीविरुद्ध लड्न अमेरिका र खाडी देशहरूबीच एकता आवश्यक भएको बताएका थिए । साथै उनले क्षेत्रीय स्थायित्वका लागि अमेरिकाले सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका थिए । विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘आतंकवाद र चरमपन्थीविरुद्ध लड्न रियादको प्रतिबद्धतालाई सबै खाडी देशले आत्मसात् गर्न जरुरी भएकोमा राष्ट्रपतिले जोड दिनुभएको छ ।’
प्रकाशित : भाद्र २५, २०७४ १०:५७
डाक्टर अंकल भन्नुहुन्छ
भाद्र २५, २०७४ डा. सुमनराज ताम्राकार
मानव शरीरको कम्मरको दुवैतिर सिमी आकारका मृगौलाहरू हुन्छन् । वयस्कमा कम्प्युटरको माउस साइजको हुने मृगौलाको तौल १ सय ५० ग्राम जति हुन्छ ।
दायाँतर्फको मृगौला थोरै तलतिर हुन्छ । २४ घण्टामा मृगौलाले करिब १ सय ८० लिटर रगत (तरल पदार्थ) फिल्टर गर्छ । त्यसमध्ये रगतमा रहेको विकार वस्तु (हानिकारक र रासायनिक पदार्थ) फिल्टर गरेर १७८.५ लिटर तरल फेरि शरीरमा फर्काउँछ । यस प्रक्रियामा स्वस्थ मानिसको शरीरमा दैनिक करिब डेढ लिटर पिसाब निर्माण हुन्छ । पिसाब थैलीले टयांकीको रूपमा शरीरबाट बाहिर फयाँक्नुअघि भण्डारणको रूपमा पिसाब थैलीमा दुई कप बराबर पिसाब २ देखि ५ घण्टासम्म थेग्न सक्छ ।
मृगौला कसरी बिग्रन्छ ?
मृगौला तथा पिसाब नलीमा हुने संक्रमण, मृगौलाकै सुजन (नेफ्राइटिस), मृगौलामा पत्थरी, मृगौलामा पानीको फोका (सिस्ट) बन्ने समस्याका कारण मृगौलामा खराबी हुन सक्छ । मृगौलाकै वंशानुगत समस्या तथा टयुमरले पनि खराबी हुन्छ । मृगौलाभित्रको नेफ्रोनको सुजन, लामो समयसम्मको मधुमेह, उच्च रक्तचाप तथा वंशाणुगत कारणले सधंैका लागि मृगौला बिग्रन सक्छ ।
मृगौलाले ८५ देखि ९० प्रतिशतसम्म काम गर्न छोडेपछि शरीरमा विकारयुक्त रासायनिक वस्तुहरू थुप्रिन्छन् । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा मेसिनको सहायताले विकारसँगै अनावश्यक लवण र अतिरिक्त पानी शरीरबाट बाहिर फ्याँक्ने प्रक्रियालाई डायलाइसिस भनिन्छ ।
पत्थरी कसरी हुन्छ ?
मृगौलामा पत्थरी हुनुमा विभिन्न कारण हुन सक्छन् । तुलनात्मक रूपमा यसबाट प्रभावित बिरामीका लागि गर्मीको समय अझै बढी घातक हुन्छ । धेरै गर्मीका बेला शरीरबाट पसिनाको रूपमा पानी बाहिर जान्छ । सोही अनुपातमा पानी नपिउनाले शरीरमा पानीको मात्रा कम हुन्छ । जीउ सुक्खा हुन जान्छ । यसले गर्दा पिसाबमा भएका विभिन्न तत्त्वहरूको घनत्व (कन्सेन्ट्रेसन) पनि बढ्छ । त्यसपछि ती तत्त्वहरू एक आपसमा मिलेर ढिक्का बनी पत्थरीको रूप लिन्छ । घरबाहिर चर्को घाममा काम गर्ने र पानीको साथै अन्य तरल पदार्थ नपिउने व्यक्तिहरूलाई यो समस्या लाग्ने बढी सम्भावना हुन्छ ।
पर्याप्त पानी पिऔं
शरीरमा पानीको मात्रा कम हुनु मात्रै मृगौलाको पत्थरीको कारणचाहिँ होइन । यसबाहेक पिसाब नली थुनिनु वा अन्य केही संक्रमण हुनु, हप्तौंसम्म पनि एकै ठाउँमा बसिरहनु, खानामा क्याल्सियम, अक्जालेट, युरिक एसिड, भिटामिन ‘डी’ को मात्रामा बढी हुनु, केही औषधिको गलत प्रयोग र अन्य विभिन्न रोगका कारणले पनि पत्थरीको समस्या हुन सक्छ । अमिलो रसयुक्त फल वा पेयले पत्थरीको समस्या घटाए पनि भिटामिन सी चक्कीको रूपमा बढी लिँदा पत्थरी हुन सक्छ । यी विभिन्न कारण भए पनि पर्याप्त पानी पिउने र स्वस्थ्य जीवन शैली अपनाउने गर्नाले मृगौलाको रोग लाग्ने जोखिम कम हुन्छ ।